मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बाँके /बर्दियाका विषयमा प्रदेश सभामा के भने ? पढ्नुहोस् मन्तव्य - Arthapage
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बाँके /बर्दियाका विषयमा प्रदेश सभामा के भने ? पढ्नुहोस् मन्तव्य
प्रकाशित मितिः २० आश्विन २०७७, मंगलवार १९:१० October 6, 2020
हामीले हाम्रो प्रदेशलाई समृद्धि बनाउँदाखेरी हरेक क्षेत्रको योगदान मिसाउनुपर्छ । त्यस अर्थमा हामी कुनै क्षेत्र बिशेषको केन्द्रीत भएर सोच्छौ, यो सम्भव छैन । कुनै एउटा क्षेत्र बिशेष केन्द्रित भएर यो प्रदेशको सम्बृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? किमार्थ सकिदैन ।
हामीले सोच्दाखेरी हाम्रो प्रदेशमा रहेका १२ वटै जिल्लाको सम्बृद्धिको परिकल्पना हामीले सामूहिकरुपमा गर्नुपर्छ । यो प्रदेश सरकारले वा प्रदेश सभाले सोच्दाखेरी १२ वटै जिल्लाका जनताको सम्बृद्धिको चाहानाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले त्यो उचाईबाट , त्यो मान्यताबाट आफुलाई प्रस्तुत गर्न सकियौं भने बिमती हुनपर्ने कारण केही रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
राजधानीका लागि हामीले जुन ठाउँ तय गरेका छौ त्यसले साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्छ । जुन ठाउँ हामीले तय गरेका छौं त्यो ठाउँ कस्तो हो त भन्दाखेरी यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो एकल नदी सभ्यता भएको ठाउँ हो । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नदी भनेको राप्ती नदी । जसको उद्गमदेखि अन्त्यसम्म यही प्रदेशमा भएर बग्ने गर्छ ।
एकल अधिकारमा रहेको नदी सभ्यताको एउटा बिन्दुमा हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेका छौं । र त्यो नदी यस्तो नदीका रुपमा रहेको छ दुईवटा अन्चलिक मनोबिज्ञानलाई जोड्ने काम गर्छ ।
दुईवटा अन्चलिक मनोविज्ञान मात्र होइन त्यसले भेरी अन्चल अन्र्तगतका बाँके, बर्दियाको मनोविज्ञानलाई पनि जोड्ने काम गर्छ किन भन्दाखेरी आज त्यही राप्ती नदी अन्र्तगतको सिक्टा सिंचाई परियोजनाले बाँके जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा सम्भावना उजागर भइरहेको छ ।
हामी बाँके, बर्दियामा हरित क्रान्तिको परिकल्पना गरिरहेका छौं । अब नेपालमा हरित क्रान्तिको नेतृत्व कँहीबाट हुन्छ भने त्यो बाँके, बर्दिया जिल्लाले गर्न सक्छ किनकी एकातिर भेरी डाईभर्सन आयोजना अगाडी बढ्दै छ अर्कोतर्फ सिक्टा सिंचाई आयोजना अगाडी बढ्दै छ ।यसका माध्यमबाट त्यो ठाउँ हरित क्रान्तिको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने मान्यताको परिकल्पना गरेर त्यसका आधारमा अगाडी बढ्दै छौं भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
अर्को तर्फ पश्चिमको गेटवेका रुपमा, कर्णालीको गेटवे भन्नुहोस् अथवा सुदूरपश्चिमको गेटवेका रुपमा भन्नुहोस् नेपालगन्ज भन्सार नाका रहेको छ । स्वभाविकरुपमा हामीले त्यस ठाउँका जनताका लागि सेवा र बस्तुको उत्पादन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण केन्द्रका रुपमा नेपालगन्ज क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौ भनेर बृहत्तर महानगरको परिकल्पना हामीले पहिलेदेखि नै अगाडी सारेका छौं ।
(मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंगलवार प्रदेशसभामा दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मितिः २० आश्विन २०७७, मंगलवार १९:१० |
Prevभालुवाङ्ग राजधानी राख्ने प्रस्ताव पारित : ६९ मत पक्षमा, १३ मत बिपक्षमा
Nextठाकुरद्धारामा तयार भयो ‘ट्री–हाउस’, शुल्क तिरेर पर्यटक बास बस्न सक्ने